Tsara ve sa ratsy ny mandeha foana ny telefaona Android anao? | Androidsis
Tena ratsy ve ny mijanona hatrany amin'ny telefaona Android anao?
Eder Ferreño | | bateria, Android cheat
Manodidina ny batterin'ny finday Android-misy foana dia misy angano sy tsaho marobe. Avy amin'ny inona mety fa nivadika hampiasa karazana fiaviana iray na fika hiarovana bateria. Adihevitra iraisana dia ny tokony hanapahana na tsia ny telefaona amin'ny alina na indraindray. Betsaka ny olona manana ny finday avo lenta amin'ny fotoana rehetra. Misy zavatra lazain'ny sasany fa tsy tsara.
Inona no marina ao amin'ireo fanehoan-kevitra ireo? Tena misy foana ve ny findaintsika Android? Sa iray amin'ireo angano maro momba ny bateria amin'ny Android? avy eo lazainay aminao bebe kokoa momba ireo tsaho ireo izay efa nohenointsika teny an-tsena efa ela.
Raha ny lojika dia zavatra miankina amin'ny mpampiasa tsirairay izy io. Fa ny zavatra mahazatra dia izany ny fampiasana finday somary mavesatra dia vita. Ampiasaina isan'andro izy hiantsoana, hijerena, hampiasana rindranasa na lalao, ka matetika dia misy ny mpampiasa izay saika tsy namono azy mihitsy. Raha misy kosa mamono azy amin'ny alina. Ireo safidy roa ireo dia misy mpanaratsy maro tahaka ny mpanaraka.
Lafiny iray tsy maintsy dinihina amin'ny fotoana rehetra dia ny smartphone dia fitaovana sarotra. Izy io dia tsy vitan'ny singa marobe fotsiny, fa manana dingana maro mihazakazaka isika raha mampiasa finday matetika. Noho izany, ity dia zavatra hiteraka akanjo sy rovitra amin'ny fotoana rehetra. Tsy zavatra azo lavina na ahoana na ahoana. Saingy amin'ity lafiny ity, misy faritra sasany marefo kokoa.
Ny baterian'ny telefaona Android dia singa iray izay mahamarika ny fahitana akanjo be dia be. Noho izany, misy tranga izay mahamarika ny fanjifana avo kokoa, na dia amin'ny fitsaharana aza. Na hitanao fa maharitra kely kokoa noho ny tamin'ny voalohany ny bateria. Ireo no lafiny efa niainan'ny ankamaroan'ny mpampiasa tamin'ny findainy tamin'ny fotoana iray. Ka ny akanjo sy rovitra dia zavatra miafara amin'ny fakana ny tolotra amin'ny bateria finday voalaza.
Noho izany, betsaka ny manam-pahaizana milaza izany fiatoana iray dia tokony omena tsindraindray momba ny telefaona Android. Fiatoana azo omena amin'ny famonoana ny telefaona, mamela azy hipetraka mandritra ny fotoana fohy nefa tsy ampiasaina. Ka azo hahena ny akanjo sy ny tomany, ankoatry ny fampijanonana ireo fizotrany maro izay mandeha, izay amin'ny fotoana fohy dia mety tsy hahomby ary hiteraka olana amin'ny finday.
Na dia mety misy aza ny mpampiasa tsy afaka mamono ny telefaona, ohatra noho ny antony miasa. Noho izany, ho an'ireo mpampiasa finday Android amin'ny tranga toy izany, ny tolo-kevitra dia ny hamerenana amin'ny laoniny ny telefaona. Tsy fomba iray hanitsiana ny hadisoana maro fotsiny izany ny fihazakazahana izay mitranga ao, io koa dia fomba iray hanomezana aina kely azy io. Ny sasany milaza fa afaka manampy amin'ny fanatsarana ny fiainana findainao izany.
Tsy zavatra efa voaporofo fa manam-pahaizana maro rManoro hevitra izy ireo ny hamerenana telefaona indroa isan-kerinandro. Ka azo atao ny manome an'io fitsaharana io amin'ny Android amin'ny resaka asa. Zavatra azon'ny rehetra atao izany koa raha manana smartphone miaraka amin'ny bateria tsy azo esorina ianao. Na dia tsy voatery aza izany. Raha tsy vonoin'ny mpampiasa matetika ny findainy dia tsy fambara koa fa hiharatsy kokoa ny findainy. Saingy azo inoana fa hijaly kokoa amin'ny akanjo toy izany amin'ny tranga toy izany.
Mikasika ny resaka famonoana ny findainao Android amin'ny alina dia be ny adihevitra anio. Betsaka no manolotra an'ity ho fomba iray hamonjeny ny fiainana bateria amin'ny telefaona ary koa hampihena ny hafy sy ny triatra izay iaretan'ny telefaona sy ireo singa ao aminy ankehitriny. Saingy tsy izany ihany no antony tokony hodinihina amin'ity lafiny ity.
Amin'io lafiny io dia betsaka kokoa ny ifandraisany amin'ny fiankinan-dohan'ny mpampiasa marobe amin'ny findainy Android. Misy toro-hevitra vitsivitsy ho an'ny mpampiasa azy ireo mampihena ny fiankinan-doha amin'ny findainao, ny fomba fampiasana aza manelingelina ny maody amin'ny fotoana rehetra. Fa ny famonoana ny telefaona amin'ny alina dia lafiny iray hafa tokony hodinihina. Satria afa-tsy amin'ny tranga vitsivitsy dia tsy mila misy 24 ora isan'andro ny mpampiasa.
Noho izany, tsy mila mampandeha ny telefaona amin'ny fotoana rehetra izy ireo. Ka indraindray mahafinaritra ny mamono azy io ary miala sasatra amin'ny telefaona koa. Ity dia zavatra azo atao amin'ny alina raha tiana ary tsy mahazo mahazo aina amin'ny alina, na dia afaka misafidy aza ny tsirairay rehefa te-hamono ny findainy Android. Saingy asaina anaovana izany indraindray. Tsy dia ela loatra hanitarana ny androm-telefaona resahina, fa mba hanana fotoana kely kokoa ho anao, izay manan-danja ihany koa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Tutorials » bateria » Tena ratsy ve ny mijanona hatrany amin'ny telefaona Android anao?
Ny tranga voalohany ho an'ny Galaxy Fold dia efa tena izy